Amabali EBhayibhile: Ubukumkani Buyahlukana - IWebhsayithi Esemthethweni YamaNgqina KaYehova
UYASAZI na isizathu sokuba le ndoda iyikrazule ibe ziziqwenga ingubo yayo? UYehova wayixelela ukuba yenjenjalo. Le ndoda ngumprofeti kaThixo uAhiya. Uyazi na ukuba umprofeti yintoni? Ngumntu oxelelwa nguThixo izinto ngaphambi kokuba zenzeke.
Apha uAhiya uthetha noYerobhoham. UYerobhoham yindoda uSolomon awayenza umveleli komnye umsebenzi wokwakha. Xa uAhiya edibana noYerobhoham endleleni, uAhiya wenza into emangalisayo. Ukhulula ingubo yakhe entsha ayinxibileyo aze ayikrazule ibe ziziqwenga ezili-12. Uthi kuYerobhoham: ‘Zithabathele iziqwenga ezili-10.’ Uyasazi na isizathu sokuba uAhiya anike uYerobhoham iziqwenga ezili-10?
UAhiya uyachaza ukuba uYehova uza kubuthabatha ubukumkani kuSolomon. Uthi uYehova uza kunika uYerobhoham izizwe ezili-10. Oku kuthetha ukuba uRehobhoham, unyana kaSolomon uza kusala elawula izizwe ezibini kuphela.
Xa uSolomon esiva okuthethwe nguAhiya kuYerobhoham, uba nomsindo gqitha. Uzama ukumbulala uYerobhoham. Kodwa uYerobhoham ubalekela eYiputa. Emva kwethuba elithile uSolomon uyafa. Ubengukumkani iminyaka ema-40 kodwa ngoku kumiselwa unyana wakhe uRehobhoham njengokumkani. Ngoxa eseYiputa, uYerobhoham uva ukuba uSolomon uﬁle, ngoko ubuyela kwaSirayeli.
URehobhoham akangokumkani ulungileyo. Uthi chatha ukungabi nanceba ebantwini kunokuba uyise uSolomon ebenjalo. UYerobhoham namanye amadoda adumileyo baya kuKumkani uRehobhoham baze bamcele ukuba abaphathe kakuhle abantu. Kodwa uRehobhoham akaphulaphuli. Enyanisweni, ubacinezela ngakumbi kunangaphambili. Ngoko abantu bamisela uYerobhoham ukuba abe ngukumkani kwizizwe ezili-10 kodwa izizwe ezibini, esakwaBhenjamin nesakwaYuda ziqhubeka ziphantsi kokumkani uRehobhoham.
UYerobhoham akafuni abantu bakhe baye kunqula eYerusalem etempileni kaYehova. Ngoko wenza amathole amabini egolide aze athi abantu bobukumkani bezizwe ezili-10 mabanqule wona. Kungekudala ilizwe lizaliswa lulwaphulo-mthetho nogonyamelo.
Kuvela ingxaki nakubukumkani bezizwe ezibini. Kwiminyaka engaphantsi kwemihlanu emva kokuba uRehobhoham emiselwe njengokumkani, ukumkani waseYiputa ulwa neYerusalem. Uthabatha ubutyebi obuninzi etempileni kaYehova. Ngoko itempile ayihlali xesha lide injengokuba yayinjalo ekwakhiweni kwayo.
1 Kumkani 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.
Ngoobani amagama amadoda amabini akulo mfanekiso, yaye akhonza njengantoni?
UAhiya uyenza ntoni ingubo ayinxibileyo, yaye oko kubonisa ntoni?
USolomon uzama ukwenza ntoni kuYarobheham?
Kutheni abantu bebeka uYarobheham ukuba abe ngukumkani phezu kwezizwe ezilishumi?
Kutheni uYarobheham esenza amathole amabini egolide, yaye kwenzeka ntoni kwelo lizwe ngokukhawuleza emva koko?
Kwenzeka ntoni kubukumkani bezizwe ezibini nakwitempile kaYehova eYerusalem?
Funda eyoku-1 yooKumkani 11:26-43.
Wayengumntu onjani uYarobheham, yaye uYehova wamthembisa ntoni ukuba wayegcina imithetho kaThixo? (1 Kum. 11:28, 38)
Funda eyoku-1 yooKumkani 12:1-33.
Abazali nabadala banokufunda ntoni kumzekelo ombi kaRehabheham ngokuphathelele ukusebenzisa kakubi igunya? (1 Kum. 12:13; INtshu. 7:7; 1 Pet. 5:2, 3)
Ulutsha namhlanje lufanele luye kubani ukuze lufumane ulwalathiso olunokuthenjwa xa lusenza izigqibo ezibalulekileyo ebomini? (1 Kum. 12:6, 7; IMize. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 13:7)
Yintoni eyashukumisela uYarobheham ukuba amise iindawo ezimbini zokunqula ithole, yaye oku kwakubonisa njani ukuswel’ ukholo ngokungathethekiyo kuYehova? (1 Kum. 11:37; 12:26-28)
Ngubani owakhokela abantu ababeyinxalenye yobukumkani bezizwe ezilishumi kwimvukelo nxamnye nonqulo lokwenyaniso? (1 Kum. 12:32, 33)